Manohana an'i Monja Roindefo ho filohan'ny tetezamita iraisana aho!
2009-08-28 @ 11:06 in Politika
Amin'ny maha-mpandala ny ara-dalàna ahy teo amin'ny tolona ka mahafantampantatra avy hatrany ny antony nanoloran'ny ankolafy Ravalomanana an'i Monja Roindefo ho filohan'ny tetezamita iraisana dia tohanako feno io tolotra io. Koa mandrisika indrindra ny praiminisitry ny FAT aho, izay tsy mitovy firehana aminy, handresy lahatra ny mpiara-mitolona aminy fa lalana tokana ahafahany mirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena ho avy io, sady efa ampy taona tsara izy ny hirotsaka, tsy mila fanamboarana ny lalam-panorenana izany. Manentana ny fikambanana samihafa hanohana io tolotra hanaovana an'i Monja Roindefo ho filohan'ny tetezamita iraisana io.
Ho antsika namana rehetra mpandala ny ara-dalàna tia maneho hevitra an-tserasera ihany koa. Saino kely ny tanjona ao anatin'io fanohanana ataoko io fa aza sendaotra be ihany. Fanavotana ho antsika io sady misy rahateo fomba fitenenana manao hoe: "Rava ny firenena miady an-trano". Aelezo izao fomba fanohanana izao fa ho hitantsika ihany ny tohiny. Mbola mila fanazavana indray ve ianareo? Ento amin'ny saina ho'aho ity politika ity fa aza entina amin'ny fo.
Vaovao farany: nanemitra ny seranam-piaramanidina Ivato indray ny miaramila miisa 20 eo ho eo, "mitsena" ny delegasiona avy any Maputo, indrindra fa Atoa Manandafy. Loharanam-baovao dia ny Radio Nasionaly Malagasy. Araho ny Twitter.
jentilisa, Antananarivo 28 aogositra 2009, 01: 10 atoandro